Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 9, 2019 00: 30 Awekho amazwana
Kodwa-ke, ngokusho kososayensi, ukukhononda akusizi kangcono, ngokuphambene nalokho, kubi kabi impilo yakho kanye nabantu abazwa izikhalazo zakho ezingapheli bazizwe bengenakuzwa.
Izazi zezokwelapha ezazifunda lezi zenzakalo zafika eziphethweni ezilandelayo. Izikhalazo eziqhubekayo zimbi kakhulu ngomzwelo wakho nangokwenzakwabo nabangani abazwayo. Zibuye zingozi kakhulu ebuchosheni bakho nasempilo yakho ngokujwayelekile.
Nakhu kungani ukukhalaza kubi impilo yakho:
1. I-synapses yobuchopho:
La Into yokuqala abafundi be-neuroscience abayifunayo kuyisenzo se-synapses ebuchosheni. Lezi zihlukaniswa ngemiklamo ye-synaptic. Uma ucabanga, i-synapse ithumela ama-molecule amakhemikhali kwenye i-synapse ezoba yindlela yokudluliselwa kolwazi oluphethe ulwazi. Lapho nje isignali kagesi ikhiqizwa, i-synaptic cleft iyancipha ukunciphisa ibanga okufanele lihambe. Ngakho-ke, ubuchopho buyashintsha ngokomzimba ukuze kukhululwe imicabango.
Uma kucatshangwa umqondo, kulula ukukuthola kamuva, ngoba ama-synapses aphethwe ukukhiqizwa kwawo asondelene kakhulu. Ngakho-ke, ukuba nemicabango engemihle njalo kusiza ukukhiqizwa kwabo futhi kuthanda ukubukeka kwabo okungahleliwe, okusho ukuthi kungathinta ubuntu bakho bonke futhi kukwenze kubi kakhulu. Imicabango emihle ngeke isithinte ingqondo yakho uma ungaqali indlela yayo.
Udinga isofthiwe yokuphatha umsebenzi wakho? Khetha isofthiwe yokwandisa i-accounting yakho noma ukuphathwa kwebhizinisi ukuze ukwazi ukuqapha ngempumelelo ibhizinisi lakho. Isikhathi sokugxila ebhizinisini lakho eliyisisekelo.
2. Abantu ababi
Ngendlela efanayo nemibono emibi ephindaphindiwe, ukuxubha amahlombe nabantu abanobubi kuzokukwenza ube umuntu ongekho. Uma sibheka imizwelo ethile kubantu abasizungezile, ubuchopho bethu buzama ukuvuselela ama-synapses afanayo ukuze bahlole futhi baqonde leyo mizwa efanayo. Lokhu kuthiwa uzwela.
Ngakho-ke, uma ufuna ukugcina ubuhle bakho noma ukuhlela kabusha ama-syapses akho ebuchosheni bakho emibono emihle, sebenzisa isikhathi esiningi nabantu abalungile futhi ugweme labo abona ububi kuyo yonke indawo.
Ukuze ulondoloze impilo yomzimba wakho, kumele uyeke ukukhononda nokuxubungula imicabango engalungile. Izikhalo, ukukhala, nemicabango emibi kungandisa ingozi yesifo sikashukela, ukukhuluphala, isifo senhliziyo, ukucindezeleka kwegazi, kanye nezinhlelo zokuzivikela ezibuthakathaka.
Ngaphezu kwalokho, isimo sengqondo esibi sikhuthaza ukucinwa kwe-cortisol, i-hormone yokucindezeleka, enemiphumela emibi emzimbeni wakho. Kungabangela izinkinga zenhliziyo, izinkinga zememori kanye nezinkinga zokufunda, amazinga akhulayo we-cholesterol egazini negazi, isifo samathambo (Lokhu kwakubangelwa ukukhumuzeka kwamathambo), amandla omzimba obuthakathaka nokuzuza kwesisindo.
Ziningi izizathu zokubalekela ukungahambi kahle futhi uphendukela kubantu abomomothekayo kanye nomoya ojabulisayo nowokutheleleka.
I-Oct28 12: 20